Gaming Product တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး နာမည်ရလာတဲ့ MAD CATZ က ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
Gaming Product တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး နာမည်ရလာတဲ့ MAD CATZ က ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီနော်
Gaming Product တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး နာမည်ရလာတဲ့ MAD CATZ က ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီနော်…
ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ သက်ဝင်စီးမျောနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Gaming Stereo Headset နဲ့ Earbuds ရှိမှ အဆင်ပြေမယ်နော်။
ဒါ့ကြောင့် ဈေးလည်းအရမ်းမများ MAD CATZ က ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေတဲ့ Gaming ပစ္စည်းထဲကမှ Gaming Stereo Headset နဲ့ Authentic E.S. PRO+ Gaming Earbuds တွေကို ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ပစ္စည်းအကုန်မြန်လို့ မြန်မြန်မှာဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
MAD CATZ The Authentic F.R.E.Q.2Gaming Stereo Headset
Shop here: http://bit.ly/358nETv
MAD CATZ The Authentic F.R.E.Q.4Gaming Stereo Headset
Shop here: http://bit.ly/3nau3Uq
Newer လူကြိုက်များတဲ့ Acer Swift3SF314-57-33QL Silver (i3-10th Gen) တွေ ICT.com.mm မှာ Stock ရှိလို့ ချက်ချင်းဝယ် ချက်ချင်းရနိုင်ပြီနော်
Older ကွန်ပျူတာ (၃)လုံးလောက်ကို Anti-virus ထည့်ချင်တယ်၊ တကယ်ကောင်းတာလည်း လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံမယ့် Anti-Virus